I-Photoshop: ukubuyela emva ngexesha > UVielhuber uDavid
I-Photoshop: ukubuyela emva ngexesha05
Xa abantakwabo uThomas noJohn Knoll baqala ukwenza iAdobe Photoshop ngo-1987, ndandingekazalwa. Namhlanje, kwi-2013, isoftware yenye yeenkqubo ezaziwa kakhulu ngokubanzi kunye nenkokeli yemakethi engenakuphikiswa ekusetyenzisweni kwemifanekiso. Enkosi kwiAdobe kunye neMyuziyam yeMbali yeKhompyuter, isoftware ngoku iya kugcinelwa izizukulwana ezizayo ngendlela ekhethekileyo.
Ikhowudi yemvelaphi ye-Photoshop 1.0.1 isandula ukukhutshwa ngeenjongo ezingezizo ezentengiso- imigca eyi-128,000, emva kokuba iguqulelwe kwikhowudi yomatshini, ayinakulunga kwi-floppy disk eyi-3.5 ”(1.44 MB) . Nangona ukudibanisa ikhowudi ebhalwe kwi-Pascal kwi-hardware yanamhlanje (Mac) ngokuqinisekileyo kunzima, ikhowudi inexabiso elikhulu kwimbali.
Nangona inguqulelo yokuqala ingazange ixhase iileya okanye iindlela, uthelekiso kunye nohlobo lwangoku lweFotohop CS6 lubonisa ukuba yeyiphi into efanayo enokumangalisa. Kukho iminyaka engama-25 phakathi kwezi skrini zilandelayo-ezenza ukuba intliziyo yomnqweno ibethe ngokukhawuleza! Qaphela ulungelelwaniso olufanayo lwezixhobo ngasekhohlo:
Ifotohop 13.1.2 (CS6)
vala2 imithombo yeendaba entsha GmbH
Ifowuni +49 89 21 540 01 42
Ifeksi +49 89 21 544 59 1
Ukuqinisekiswa kwemephu yeW3C
Indlu yesibane kuGoogle